Nice Help | Waqtiga ku deeqa
Beeraha Cuntada ee Great Plains
Bangiga Cuntada Weyn wuxuu ubaahanyahay iskaa wax u qabso maalin kasta si ay uga caawiyaan kala saarida, sumadeynta, iyo dib ucelinta cuntooyinka tabaruca iyo kuwa badan, iskugu keena sanduuqyada iyo bacaha loogu talagalay barnaamijyada khaaska ah, siinta taageero maamul, iyo kaalmaynta munaasabadaha gaarka ah. Hadafkayagu waa inaan bixino khibradaha ugu wanaagsan ee tabaruc ee ugu macquulsan oo aan u diyaarinno mutadawiciinteena inay noqdaan u doodeyaal gaajo u dhinta beesheena. Markii aad waqtigaaga ku tabarucdo Bangiga Cuntada Weyn (Great Plains Food Bank), waxaad qayb ka noqotaa la-dagaallanka gaajada ee Waqooyiga Dakota iyo Clay County, Minnesota.
Booqo bogga guud ee tabaruca ah ee Tabaruca Banka Great Plains si aad waxbadan uga sii ogaato.
Hay'adaha samafalka gobolkeena ayaa wali u baahan tabaruciyaal maalin walba. Halkan ka hubi liistada Caawinta Liisaska tabaruca ee Wadnaha.
Agaasimayaasha Deegaanka Fargo-Moorhead ee Adeegyada Tabaruca
Waxaan aragnaa koror ku yimid baahiyaha tabaruca ee degdegga ah ee ka dhex jira bulshada dhexdeeda waxaanna soo uruurineynaa liisaska fursadaha. https://fmdovs.wordpress.com/covid…/volunteer-opportunities/
Cuntooyinka Degdegga ah
Waxay u baahan yihiin mutadawiciin dheeri ah si ay u diyaarsadaan dambiilooyinkooda cunnada, oo maalin walba la qaybiyo. Hawlgal ahaan, waxay ku qasbanaadeen inay wax ka beddelaan hawshooda oo ay waayaan tabarucyaal qaarkood, maadaama dad badan oo tabaruc ah hadda ka badan yihiin 65 sano una baahan yihiin inay gurigooda joogaan. Fadlan la xiriir contact@emergencyfoodpantry.com haddii aad jeceshahay faahfaahin ku saabsan sida / goorta aad tabaruc ugu shaqeyso Gargaarka Cuntada Degdegga ah.
Waxay soo saareen codsi ah in qado loogu diyaariyo macaamiishooda. Megan Lewis waxay aqbali doontaa tabarucaad lacageed si ay ugu iibsato agabkan cuntada waxayna ku urursan doontaa Square One Kitchen. Hadaad jeceshahay inaad tabaruc ku sameyso iibsiga cuntada qadada, ugu soo dir Megan Lewis adoo adeegsanaya PayPal ( paypal.me/milkmadecatering ).
Cuntooyinka bilaashka ah
Haddii aad rabto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida tan loo bilaabayo ama haddii aad ogtahay meel aad ka yeeli lahayd mid, la xiriir: Kayla.L.Carlson@ndsu.edu
Kabax Wadida Cuntada Gaajada
Stamp Out Hunger Food Drive, oo warqad u dirtay xamuullayaasha martida loo yahay, ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira COVID-19. Kuwa xaraashka maxalliga ah ayaa martigeliya baabuurkooda raashinka si ay isugu dayaan oo ay dib uga bilowdaan luminta ku-deeqidda cuntada. Kani waa baabuur wadid qaali ah oo loo qaybin doono iyadoo lagu saleynayo koodhka deeq-bixiyeyaasha. Waxaad ka heli kartaa goobta tabaruca halkan.
Cuntooyinka ku yaal Wheellada
Cuntada ku jirta Wheels waa barnaamij cunto siiya dadka waayeelka ah ee bulshadaada ku nool. North Dakota waxay isticmaali kartaa xoogaa caawimaad ah buuxinta meelaha tabaruca ah: gaar ahaan Waqooyiga, Galbeedka, iyo Koonfurta Fargo. Jadwalka tabarucayaashu waa kuwo jajaban oo caadi ahaan shaqeeya 45-60 daqiiqadood. Haddii aad xiiseyneyso tabarucid - booqo valleyseniorservices.org